डाक्टर बनेर गरीबको सेवा गर्ने उद्देश्य राखेका मृगेन्द्रको आफ्नै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछी…. – Gulmiews
डाक्टर बनेर गरीबको सेवा गर्ने उद्देश्य राखेका मृगेन्द्रको आफ्नै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछी….
March 10, 2016 Sanju Kauchha
No comments	भविष्यमा चिकित्सक बनेर गाउँका दिनदुखीको सेवा गर्ने इच्छा राखेका गुल्मीका मृगेन्द्र श्रेष्ठको दुबै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछी आम नेपालीसँग ज्यानको भिख मागीरहेका छन् । झण्डै ८ वर्ष अघि ट्याक्टर दुर्घटनाबाट बावुको मृत्यु पछि टुहुरा बनेका मृगेन्द्रले भविष्यमा चिकित्सक बनेर गाउँका दिनदुखीको सेवा गर्ने इच्छा राखेका थिए । सोचलाई व्यावहारमा उर्तान छात्रवृतिका लागि कोसिस गर्दै गरेका मृगेन्द्रले बिएससि दोस्रो बर्षमा अध्ययन गर्दैछन् । गरिवीको पीडा आफुले बुझेका कारण त्यो पीडालाई स्वास्थ्य उपचारको माध्यमबाट मलम लगाउने सोच थियो आफ्नै मृगौला फेल भएर यो गति भयो । आर्थिक स्थीति अत्यन्तै दयनिय भएका मृगेन्द्रको सबै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि उपचार सम्बभ नभएकोले उनले आम नेपालीसँग ज्यानको भिख मागीरहेका छन् ।
मृगेन्द्रको उपचारका लागि सहयोग जुटाउने श्रीराम थापाले यस अघि पनि थुप्रै असहाय गरिबको उपचारको लागि पठाएको रकमले धेरैको ज्यान बचेको छ । रकम हस्तान्तरण गर्नका लागि पुगेका गुल्मी कांग्रेसका सभापति भुवन श्रेष्ठले पनि आफ्नी धर्मपत्नी संगीता श्रेष्ठको नामबाट ५००० सहयोग गरेका थिए । सभापति श्रेष्ठसंग मृगौला रोगबाट पिडित मृगेन्द्रले आँखामा आँसु झार्दै अंकल म गरिबीमा हुर्के बढेकोले गरिबीको पीडा राम्रो सँग बुझेको छु, मलाई बचाउनु होस् म गरिबीका कारण उपचार गर्न नसकेका आम दिदिबहिनी दाजु भाईलाई डाक्टर बनेर मलम लगाउने छु ।
उनले त्यसो भन्दा त्याहाँ उपस्थित रेडक्रस गुल्मीका सभापति अनुप कुमार श्रेष्ठ समाजसेवी, उत्तम अर्याल र मिन प्रसाद श्रेष्ठका समेत आँखा रसाएका थिए । छोरालाई बचाउन मृगौला दिन तयार भएकी आमा सिर्जनाले मैले दिएर हुने भए मुटुको टुक्रा समेत दिने थिएँ तर त्यसले हुँदो रहेनछ । म सँग पैसा छैन त्यो नभएपछि प्रत्यारोपण भएको छैन । मैले आम नेपाली दिदिबहिनी दाजु भाईसँग मेरो छोराको प्राणको भिख माग्छु भनेकी छिन् । मृगेन्द्रको ज्यान बचाईदिन सहयोग गर्न चाहने दानविरले उनकी आमा सिर्जनाकोे फोन नं. ९८६७२६२३५३ वा पत्रकार महेन्द्र पाण्डेयको ९८५१०४५३६० मा सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सकिने भएको छ । Facebook	Twitter	Google+	Pinterest	Linkedin